दोहा (कतार) - दोहाको आकाशमा जसै बाह्रौ दिनको चन्द्रमा देखियो, मञ्चको चम्किलो विशाल पर्दामा घडीको दृश्यसहित नेपथ्य प्रस्तुतीको संकेत सुरु भयो ।
दोहाको ‘एसियन टाउन एम्पिथिएटर’को मञ्चमा आइतबार बेलुकी चढ्ने बित्तिकै हजारौं दर्शकको कोलाहलका बीच नेपथ्यका मुख्य गायक अमृत गुरुङले सुरुमा एकछिनसम्मै चन्द्रमातर्फ हेरे। ‘बहुसाँस्कृतिक विविधताले यो संसारलाई नै एउटा रमाइलो गाउँ बनाएको छ,’ आकाशतिर सोझिएको नजर अगाडिको दर्शक दिर्घामा घुमाउँदै उनले भने, ‘आफ्नो कक्षमा बाह्रौ दिन यात्रा गरेपछि यो चन्द्रमाले मुसलमान समुदायमा इद पर्व ल्याइरहेको छ भने अबको तीन दिनमा यसै चन्द्रमाले पूर्ण आकार लिएर हाम्रो हिन्दूबहुल नेपाली समुदायमा भने जनैपूर्णिमा ल्याइदिनेछ।’
मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको पात्रो अनुसार अन्तिम महिनाको एघारौं र बाह्रौ दिन बलिदानको पर्व मनाइने गरिन्छ। यस दिनलाई मुसलमान धर्म मान्ने विश्वभरका मानिसहरुले पवित्र ‘इद अल अदा’ का रुपमा हर्षोल्लासपूर्वक मनाउने गर्छन् । ‘इद अल अदा’ अर्थात् बलिदानको पर्व वा यसलाई ‘इद कुर्बान’ भनेर पनि मान्ने गरिन्छ । यो इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको वर्षभरिकै मुख्य दुइमध्ये एक उत्सव हो ।
त्यसपछि कन्सर्टमा लगातार नेपथ्यको सर्वकालीक हिट गीतहरु ‘छेक्यो छेक्यो’, ‘शिरफूल शिरैमा’, ‘लामपाते सुरती’ जस्ता गीतहरु बजेका थिए । अबको गीत भने अमृतले कतारमा संघर्ष गरिरहेका तन्नेरीहरुलाई उनीहरुका प्रियहरुको सन्देशका रुपमा सुनाउन चाहे ।
लेखेको सम्झना च्यातेर नफाल
केहि वर्षअघि तयार पारेको यो गीतलाई नेपथ्यले रोजगारीका निम्ति प्रवासिएका नेपाली कामदारहरुमै समर्पित गर्दै म्यूजिक भिडियो तयार पारेको थियो । म्यूजिक भिडियो कमिक एनिमेशनमा आधारित छ । युट्युवमा नेपथ्यका गीतहरुमध्ये सर्वाधिक हेरिएको र सुनिएको यस गीतमा खाडीको दूरदेशमा बसेर श्रम गरिरहेका तन्नेरी र नेपालको कतै पहाडमा बसेर उनलाई याद गरिरहेकी प्रियसीका भावहरु झल्काउन खोजिएको छ।
कन्सर्ट त्यसपछि फेरि ‘चरि मर्‍यो’, ‘जोमसोमे बजारमा’, ‘जोगले हुन्छ भेट’, ‘हामी नेपाली’, ‘यो जिन्दगानी’ हुँदै अघि बढेको थियो । त्यसपछि पूर्वी नेपालको पदयात्राका क्रममा संकलन गरिएको हाक्पारेमा आधारित ‘कोशीको पानी’ हुँदै ‘रेशम’ सम्म पुगेपछि देशप्रेमका गीतहरुको क्रम सुरु भएको थियो। ‘गाउँ गाउँबाट उठ’ ‘हिमाल चुचुरे’, ‘मै नाचेँ छमछमी’, ‘तालको पानी’ हुँदै अन्तिममा ‘रातो र चन्द्रसूर्जे’मा पुगेर कार्यक्रम टुंगिएको थियो।
नेपथ्यले यो दोश्रोपटक आफूलाई दोहाको मञ्चमा प्रस्तुत गरेको थियो।
‘यसरी परदेशमा आएर श्रम गरिरहेका नेपाली दाजुभाइहरुलाई देशको माया बोकेर आउन पाउँदा असाध्यै हर्ष लाग्छ,’ गायक अमृतले भने, ‘सँधै जस्तै हामीले नेपाली माटोबाटै उब्जिएको लोकभाकामा आधारित सिर्जनाहरु दाजुभाइहरुलाइ बाँड्न पाएकोमा खुसी लागेको छ ।’
कतारमा कन्सर्टको आयोजक मध्ये को ‘लेभल एफ.एन. एडभर्टाइजिङ एण्ड इभेन्ट’ का लक्ष्मणप्रसाद चौलागाईले भने “नेपथ्यको उपस्थितिले हामी कतारबासी नेपालीलाई एकजुट हुने मौका उपलब्ध दिलायो । कार्यक्रमको सफलताले हामी सम्पूर्ण आयोजक तथा नेपथ्य प्रेमी दर्शकमा उर्जा थपिदिएको छ.” दोहाको यो कार्यक्रमलाई लेभल एफ.एन. एडभर्टाइजिङले, कास्की आदर्श सेवा समाज र राम नगर ठिमुरा समाजको सहआयोजनमा सम्पन्न गरेका हुन्।
सँधैजस्तै दोहामा पनि गायक अमृतलाई ब्याण्डका सदस्यहरु ड्रमसेटमा ध्रुव लामा, किबोर्डमा सुरज थापा, गितारमा निरज गुरुङ, बेस गितारमा सुविन शाक्य र मादलमा शान्ति रायमाझीले सघाएका थिए।